June 2020 - San Thitsa
Zawgyi ပွဲတွေ့ယတြာမီးထွန်းနည်း(ဂါထာမီးထွန်းနည်း) ဒီလို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ သေသေချာချာ အစွမ်းရှိ စီရင်နည်းတွေကို တင်ပေးဖို့ တာဆူခဲ့တာကြာပါပြီ။တင်မယ့်တင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပေးချင်တာကြောင့် အချိန်တစ်ခုထိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။ ဒါက အင်းကွက် စမကွက်မဟုတ်ပါဖူး။ဒါကြောင့် ရေးသားစဉ် တင်းကြပ်တဲ့ စည်းစနစ်တွေ မလိုအပ်ပဲ
မှတ်ပုံမတင်သည့် တယ်လီဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များကို ဒီလကုန်မှာပိတ်သိမ်းပြီး လက်ကျန်ငွေတွေကို အစိုးရဆီ လွှဲပြောင်းပေးမယ်
Zawgyi မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းဆင်းမ်ကတ်တွေကို ဒီလကုန်မှာပိတ်သိမ်းပြီး လက်ကျန်ငွေတွေကို အစိုးရဆီ လွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ တယ်လီနောမြန်မာက အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်တွေကို အမည်ပေါက်မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက် အချိန်တပတ်လောက်ပဲ ကျန်ပြီး ဇွန် ၃၀ ရက် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အပြီး ပိတ်သိမ်းတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းက ၂/၃ လုံးပေးတဲ့ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ရွှေညောင်ပင်ကြီး ခုလဲ ပေးပြန်ပြီတဲ့
Zawgyi ထူးဆန်းတဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် ချဲဂဏန်း ၃ လုံး ၊ ၂ လုံး ကိုအထင်အရှားပေးသည်ဟုဆိုကာ လူအများလာရောက်ပူဇော်ပသကြပြန်ပြီ အခုတလောထိုင်းမှာ အထူးအဆန်းဆိုရင် ချဲဂဏန်းတောင်းကြတဲ့ပို့စ်အတော်များများကိုမြင်တွေ့နေရတယ် ၊ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်း အူဒွန်ထာနီ ( Udonthani ) ခရိုင်
အခက်ခဲ ရှိနေလျှင် မိမိ အိမ်ဂေဟာ လာဘ်ပွင့်အောင်ကြံဆောင်မည့် ဆီမီး ၃ခွက်
Zawgyi မိမိ အိမ်ဂေဟာ လာဘ်ပွင့်အောင် အပူသောကမျိုးစုံနှင်. ရင်ဆိုင် နေရသူများ အကျပ်အတည်များ မထွေးနိူင် မအန်နူ်ိင်ဖြစ်နေသူများမိမိ အိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာအဖြာဖြာ ဖြစ် အောင်နှင့် လာဘ်လာဘ. ပွင့်လန်း လာစေရန် အောက်ပါ အတိုင်း
၇ ရက် သားသမီးများ ငွေကြေး စီပွားရေး အခက်အခဲဖြစ်လျှင် ဓါတ်ဆင်ရန်
Zawgyi တနင်္ဂနွေသားသမီး များ ငွေ ကြေး စီပွါး အခက်အခဲဖြစ်လျှင် ဤဓါတ်ဆင်ရ၏ ။တြိရန်းနေ့ဟုခေါ်ဆိုသော အင်္ဂါနေ့၏့စတုရန်းအခါဟုခေါ်ဆိုသောနံနက် 10:30မှ 12:00 ကြား အတိအကျ ဆိုသော်10:45တွင် ပိတောက်ညွန့် ၂၉ ညွန့်ကို အိုးတစ်အိုး၌ ရေထည့်၍
အရူးမတောင် ချမ်းသာမပေးတဲ့ မုဒိမ်းကောင်
Zawgyi ၂၅-၆-၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့ ည (၇)နာရီခွဲအချိန်ခန့် ပဲခူးမြို့နေ မ—- (၃၄)နှစ် (စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းသူ) သည် ။ပဲခူးမြို့တွင်းဘက်သို့ ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းဟောင်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာစဉ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းထိပ်အရောက် အမည်မသိအမျိုးသား တစ်ဦး (လူမြင်လျှင်
ကံတွေ နိမ့်နေပါလားလို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာရင် ဒါလေး လုပ်ကြည့်ပါ
Zawgyi ကံတွေ နိမ့်နေပါလားလို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာရင် ဒါလေး လုပ်ကြည့်ပါ ။ ထူးခြား လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် …။လောကကြီးမှာ ဘာပဲလုပ်လုပ် အမြဲတမ်းအဆင်ပြေတယ် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး …။ အလုပ်အကိုင်တွေလည်း ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက် ကျမ်းမာရေး ကောင်းလိုက်
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
Zawgyi ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီး များအတွက် ဤလအတွင်း၌ သင်သည် မြေကိစ္စ အမွေ နှစ်ကိစ္စများ ကြုံရ တတ်သည်။ ငွေရှာရ လွယ်ကူပေမယ့်
အစွမ်းထက်လှသော မေတ္တာသုတ် အကျိုးကို လက်ငင်းရယူဖို့ နေ့ရက်အလိုက် နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ ရွတ်ဖတ်နည်း
Zawgyi “မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံ နည်းစနစ်” တနင်္ဂနွေဂြိုလ်သက် ၆ တနင်္လာဂြိုလ်သက် ၁၅ အင်္ဂါဂြိုလ်သက် ၈ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်သက် ၁၇ စနေဂြိုလ်သက်၁၀ ကြာသပတေးဂြိုလ်သက် ၁၉ ရာဟုဂြိုလ်သက် ၁၂ သောကြာဂြိ်လ်သက် ၂၁ စုစုပေါင်းဂြိုလ်သက်
စိတ်မကောင်းစရာ ညီမလေး ဇာခြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
Zawgyi စိတ်မကောင်းစရာ ညီမလေး ဇာခြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး တကယ်ပဲထာခဲ့ပီပေါ့ ကောင်းကောင်းအနားယူပါ ဇာခြည်အသုဘရှု နှင့် ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး တရားတော်နာ ဖတ်ကြားလွှာမဇာခြည်မြင့်မြတ် အသက်(၂၀) နှစ် ဘားအံမြို့ ၊ အမှတ်(၆) ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကုန်းလမ်းနေ အဖိုး